WARBIXIN: Ma Kala Burburayaa Isbaheysiga La Dagaallamaya Al-Shabaab? – Bogga Calamada.com
Q.Midoobe ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in walaacÂ ka qabto qabsashada xarakada Al Shabaab ee magaalooyin hor leh oo dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Falanqeeyayaal iyo khubaro wax ka yaqaan dagaallada qaaradda Afrika ayaa sheegay in isbedelladii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ka dhacay gaar ahaan dib usoo laabashada awoodda Al Shabaab ay dhaawacayso dadaaladdii beesha caalamka ee ku salaysnaa dhabar jabinta â€˜Argagaxisadaâ€™ (Mujahidiinta) iyo dib udhiska Somalia!.
Warbixin ciwaan looga dhigay “Ma kala burburayaa Isbaheysiga la dagaallamaya Al-Shabaab?â€ ayaa lagu daabacay Website ku takhasusay arrimaha dagaallada qaaradda Afrika .
Joshua Meservey iyo Kells Lilly oo ah laba khabiir oo dabagala arrimaha Afrika ayaa saadaaliyay in dhibaatada haysata ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan ay maalmaha iyo bilaha soo socda sababi karta dib ugurasho ka yaabisa caalamka ka hor inta aan lagaarin sanadda 2018-ka oo soo duulayaasha Soomaaliya ku sugan ay goâ€™aamiyeen in ay soo gaba gabeeyaan howlgaladooda melleteri.